Page3of 1,464«1234567...»Last »
Fashion with Yoon Eun Hye
Rockstar Fashion with Yoon Eun Hye
Yoon Nadi Lwin Moe’s Birthday Donation
Miss People 2013 Yoon Mhi Mhi Kyaw
“ထမင်းဝအောင်စားထား” ဟုဆိုသူများကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ပြီ
ရန်ကုန် (Myanmar Now) — လွန်ခဲ့သည့်သီတင်းပတ်က အင်းစိန်မြို.နယ် မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရုံးတွင် တရားလွှတ်တော်ရှေ.နေ ဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှုကြားနာစဉ် “မင်းတို့ထမင်းဝအောင်စားထား” ဟူသောစာသားများပါသည့် တီရှပ်များဝတ်ဆင်လာပြီး လူသတ်တရားခံကြည်လင်းကို လာရောက်အားပေးခဲ့သူများကို ယမန်နေ့က အမှုဖွင့်၍ ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။
ထိုကဲ့သို့ တရားခွင်အား လာရောက်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သူများအား အရေးယူပေးရန် အင်းစိန်မြို.နယ် အထွေအထွအုပ်ချုပ်ရေးမှုးက တရားလိုလုပ်၍
အင်းစိန်မြို.နယ် တရားရုံးကိုဦးတိုက်လျှောက်ရာ တရားသူကြီးက အများပြည်သူကိုထိတ်လန့်စေမှုနှင့် သက်ဆိုင်သော ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)နှင့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကို နစ်နာစေရန်ခြိမ်းခြောက်မှု ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၁၈၉ တို့ဖြင့် ပုဒ်မတပ်ပြီး လူ ၄ ဦးအားဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့ကြောင်း တရားရုံးသတင်းရပ်ကွက်မှ သိရှိရသည်။
မင်းတို့ထမင်းဝအောင်စားထားဟူသော စကားရပ်မှာ လူသတ်ရန်ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့တရားရုံးတွင်ပြောင်ပြောင်တင်းလာရောက်ခြိမ်းခြောက်မှုသည် တရားရေးမဏ္ဍိုင်တစ်ခုလုံးကို စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သောကြောင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုအားပေးလှုံ.ဆော်သူများကို ဖမ်းဆီးအရေးယူရန် ရှေ.နေအဖွဲ.အစည်းခြောက်ဖွဲ.က အစိုးရထံ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်နေ့က ကြေညာချက်ထုတ်တောင်းဆိုထားသည်။
Filed under Humor, Knowledge Base, Myanmar/Burmese | Be the first to comment! » (မြန်မာလိုလဲ ကွန်မန့် ပေးနိုင်ပါပြီ)
“Not For Sale” တေးဆို ဗျူဟာ+နေမ၀င်+ရာဇ၀င်
Myanmar on flickr
Prepaid Calling Cards and Phone Cards to Myanmar
Aye Wut Yee Thaung’s new album
Aye Wut Yee Thaung’s Western Fashion
MICHAEL LEARNS TO ROCK Live in Yangon @ 31st March
Aye Myat Thu and fashion
Rebbecca Win speaks…
Britney says Gimme more in her new single
“ဟိန်းဝေယံရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ အနုပညာခံယူချက်”
Pregnant Htet Htet Moe Oo’s Photo
ဘုန်းဘုန်း ဦးတေဇ (Tay Za)
Myanmar Model Myat Noe Chaint – RIP
Funny Joke: Thinking of getting married?
Japanese Makeup Makeover
The Strand Hotel’s Myanmar Wedding Fair
Blue Zune Thinzar’s community support work
Ye Htike is free
Daw Aung San Suu Kyi will be meeting Burmese families in New York on Sept 22
ဆရာအော်ပီကျယ်ရဲ့ကာတွန်း လက်ရာ @ သယံဇာတကျိန်စာ အနုပညာပြပွဲ
Fashion Image – October 05
“ကူညီပါရစေ” ဆိုပြီးတော့ပြည်သူ့ ချဉ်ဖတ် တွေ ဘာလုပ်နေသလဲ ..
Pyay Ti Oo and Eaindra Kyaw Zin’s Wedding Invitation Card